Phenduka u-Consultancy - Abenzi besigidi
Siqala kumaMillion Makers sigxile ekwenzeni ibhizinisi liphumelele, futhi, ukuhlela ukumiswa kwezimali kanye nokuhlelwa kabusha kwezikweletu kubangele ukuhlelwa kabusha. Sonke siyakwazi ukuthengisa okuningi, amadili amakhulu namakhasimende amaningi amathuluzi angcono kakhulu ukuxazulula izinkinga zezezimali nasekubuyiseleni ibhizinisi emjikelezweni webhizinisi onempilo. Sigxile ekulondolozeni ukulingana komnikazi futhi sizama nokubandakanya ithimba lobuholi obuphezulu, abasebenzi bangaphambili nabalingani bebhizinisi kumjikelezo wenqubo wokuguqula izinto.
Izinkampani ezibhekene nezinselelo ezinkulu, ziqasha uchwepheshe wethu ophendukayo ukuthola usizo ngazo ukuze zibuyele ethubeni.
Sisiza izinkampani ngokunikela ngokubonisana ngephrojekthi yesikhathi esifushane kanye nangesisekelo secebo lesikhathi eside. Enye yezinzuzo ezinkulu zokuqasha iqembu lethu lochwepheshe ukuletha ukuqonda. Umsebenzi ngokunikezela ngesibukezo nezincomo futhi wethule izinqubo ezizisiza kakhulu inkampani.
Uma inkampani ifike yaba nesikhuhlu sesikhashana esinzima ngenxa yezimo ezixakile, njengokuncipha komnotho okubanzi noma ukwehla komkhakha, kungahle kube ngokuqasha uchwepheshe wethu onolwazi wokuguqula isimo. Lokhu akunasiphithiphithi futhi kuyaphazamisa ukwedlula ukuletha uchwepheshe oguqukayo. Kodwa-ke, uma izingqinamba zijulile, njengokuqothuka noma ukuhlangana okuhlulekile noma ukuguqulwa kobunikazi, imvamisa, ukuphela kwendlela yokusindisa inkampani.
Ngokuvamile sithatha isinqumo ngamaphuzu ashiwo ngenhla ekuqaleni ngemuva kokuhlaziya kahle isimo:
Ukubandakanyeka kokubonisana kuvame ukuqhuba amasonto ambalwa noma izinyanga noma iminyaka kuye ngesimo nasosizini kodwa ukuqala nenkathi yokumisa kumiselwe kusengaphambili ukuze ukubandakanyeka nezindleko kulawule.
Isakhiwo semali kwesinye isikhathi sinqunywa ekuqaleni ukuze siqiniseke ukuthi zombili izinhlaka ezithintekayo zikhululekile, zingahle zisebenze ngokusezingeni elifanelekile, noma inani lokukhokha ngehora ngehora.
Izinhloso ezicacile nezilinganiswayo zisungulwa ngaphambi kokuthi iqembu lobuchwepheshe liqale ukusebenza ukuze wonke umuntu abe ekhasini elifanayo ngokuqondene nokubandakanyeka okungaphelele.
Ithimba lethu leNgcweti eshintshashintshayo lenza ukuhlolwa kokusebenza kwebhizinisi phezulu ukuze linqume amathemba alo wokuvuselelwa kanye nzuzo ezayo. Uma kungenzeka ukuthi kuvuseleleke, khona-ke kuphela esithatha isabelo, ngemuva kokuhlaziya okuningiliziwe kwemali yezinkampani kanye nokuhlolwa okuningilizayo nokuhlaziywa kwengqondo nabantu ababalulekile abebekade benza lo mbukiso, okubandakanya, abaphathi, abaphathi kanye amalungu ebhodi, njll.
Ngemuva kwalokhu, sivame ukulungiselela uhlelo lokusebenza olubhala izincomo zethu kanye nezindawo ezibalulekile zokufinyelela imigomo yokusebenza, ngaphezu kwalokho isebenza njengebalazwe lomgwaqo ekuguqukeni okuhle nokuzuzisayo.